Lomalọma - 3D ọkachamara nyocha - Geofumadas
Lomalọma - 3D ọkachamara nyocha
A na-eji usoro a eme ihe maka ndị ọrụ nwere mmasị n'ọhịa nke ịme ngosi 3D, ndị chọrọ ịmụ ngwaọrụ na ụzọ n'ụzọ zuru ezu. N'otu aka ahụ, ndị chọrọ imeju ihe ọmụma ha, n'ihi na ha na-ahụkarị sọftụwia ma chọọ ịmụta ịhazi nhazi ụzọ atọ dị iche iche nke nnweta, ịme ihe na inye data maka ngwa ndị ọzọ.
Mepụta ikike maka nnweta, nhazi na nhazi nke ụdị akụkụ atọ. Usoro a gụnyere mmụta nke 3Ds Max, otu n’ime mmemme eji eme ihe n’ọhịa ihe nlere; yana iji ngwa ọrụ ejiri ozi a na-arụkọ ọrụ na ngwa ndị ọzọ, dịka Recap na Blender. Ọzọkwa, ọ gụnyere usoro nnabata Revit iji ghọta etu esi arụ ọrụ na usoro BIM yana Inventor Nastran iji mụta banyere ịme ngosipụta na nyocha nke akụkụ n'ichepụta ihe.
Enwere ike iwere ihe nkuzi n’adabereghị, na-anata diplọma maka usoro agụmakwụkwọ ọ bụla manaDiploma 3D Model Model»Na-enyefe naanị mgbe onye ọrụ ewerela usoro ọmụmụ niile na njem.
Uru nke itinye n'ọrụ na ọnụahịa nke Diploma - Ọkachamara Nlereanya 3D
Sketchup ………………………………… .. .. USD 130.00 24.99
Ihe ngosi 3D… Max ……………………………………… 130.00 24.99
Idozigharị ihe ngosi …………………………… 130.00 24.99
Blender - Nlereanya obodo… .USD 130.00 24.99
Previous Post«Previous Revit MEP Course - umbme Plọmba
Next Post Diploma - Ọkachamara GeospatialNext »